Injineer Yariisow oo kulan la qaatay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Injineer Yariisow oo kulan la qaatay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan Yarisow ayaa maanta kulan aan caadi ahayn la qaatay safiirka Turkiga u fadhiya dalka Soomaaliya Olgan Baker.
Labada dhinac ayaa kulankooda uga hadlay xiriirka labada dal, horumarinta warbaahinta dalka iyo sidoo kale sidii wasaarada warfaafinta looga saacidi lahaa fullinta qorshaheeda oo ay ugu horeeyso hirgelinta wacyi-gelinta bulshada.
Injineer Yariisoow oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa marka hore safiirka uga mahad-celiyey doorka ay Turkiga ka ciyaarto Soomaaliya, isagoona Turkiga ku tilmaamay inuu yahay walaal si kal iyo laab ah u taageera Soomaaliya.
Dhinaca kale, Injineer Yariisow ayaa sheegay in dalalka kale looga baahan yahay inay ku daydaan Turkiga, islamarkaana ay si toos ah dowladda federaalka iyo shacabkeedaba usoo gaarsiiyaan taageeradooda.
Ugu dambeyntii, Injineer Yariisow ayaa haatan damacsan sidii taageero loogu heli lahaa qorsheyaasha wasaaradda warfaafinta, oo haatan u baahan in dib u habeyn weyn lagu sameeyo.